Ny tsara indrindra amin'ny Costa Brava: Cala Corbs | Vaovao momba ny dia
Enric Gili | | Barcelona, Weekend, General, tora-pasika, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Androany aho hiresaka aminao momba ny faritra tiako amin'ny Girona's Costa Brava, faritra voaaro mahaliana ny Cap Roig. Hifantoka manokana amin'ny iray amin'ireo lava-borosy tsara tarehy indrindra aho, Cala Corbs.
Cala Corbs dia tafiditra ao amin'ny faritra voajanahary an'ny Es Castell, iray amin'ireo virijina virjina mbola mijanona eo amin'ny morontsirak'i Girona, ao amin'ny tanànan'i Palamós. Izy io dia fidirana an-dranomasina tery voaaro amin'ny rivotra sy ny onja izay ahitan'ny ranomasina loko manga turquoise manaitra.
10 km ny morontsiraka avy any Palamós mankany Calella de Palafrugell tsy misy fotony ary hatsaran-tarehy mendrika jerena, Costa Brava tena izy. Ala kesika izay mahatratra ny ranomasina, morontsiraka be vato sy rano mangarahara, taratry ny Costa Brava talohan'ny firoboroboan'ny mpizahatany Espaniola tamin'ny taona 60 sy 70.
Na Salvador Dalí aza dia nahatsikaritra ny hatsaran'i Cap Roig. Ny studio fandokoana azy dia teto, ary koa ny sary hosodoko Josep Maria Sert.
Tantara kely. Tamin'ny taona 1994, ny mponin'i Palamós dia nifampidinihana tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka momba ny fananganana kianja golf any Es Castell. Ny ankamaroan'ny mponina dia nanohitra amin'ilay tetikasa sy amin'ny vinavina ary noho io antony io dia mijanona ho tsy simba ilay faritra, tsy misy trano ary arovana tanteraka. Izy io dia tafavoaka velona tamin'ny tsindry fizahan-tany sy fizahantany lehibe nananan'ny faritra. Nanomboka teo, ny lapan'ny tanànan'i Palamós sy ireo tanàna mifanila aminy dia niaro ilay faritra ary nanamboatra ny fidirana ao aminy mba hahafahan'ny tsirairay mankafy azy io eo am-panajana ny tontolo iainana.
Ahoana ny fomba hahatongavana any ary inona no hatao any Cala Corbs?
Ho an'i Cala Corbs Amin'ny ranomasina na an-tongotra ihany no ahatongavan'i Playa de Castell (Palamos).
Mba hahatongavana any Playa de Castell dia mila mihazo ny làlambe mampitohy an'i Girona sy La Bisbal d'Empordà amin'ny Costa Brava (Playa de Aro, Palamós ary Palafrugell). Manakaiky an'i Palamós sy akaikin'i Vall-llobrega dia ho hitantsika ny lalana mihodina izay tondroin'i Castell. Manohy ny lalan'io lalana io izahay, làlana eo an-toerana io. Ao anatin'ny 5 minitra fotsiny ary manohy mahitsy hatrany amin'ny arabe dia ho tonga eo amin'ny toerana fijanonan'ny Playa de Castell izahay. Ny fidirana amin'ny fahavaratra dia tsy maimaim-poana, mitentina eo amin'ny 3 Euros mandritra ny tontolo andro, natao ho fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana.
Raha te hankafy ny Cap Roig mandritra ny andro vitsivitsy ianao dia afaka mijanona amin'ireo hotely marobe ao amin'ny faritra (na any Palamós, Calella de Palafrugell na ny afovoan'ilay faritra) ary koa toby fitobiana, ny iray amin'izy ireo dia eo akaikin'ny Es Castell (Camping Benelux).
Raha vao tafajanona, eo aloha dia i Es Castell, morontsiraka mbola tsy simba sy lehibe. Eo ankavianao dia ho hitantsika ny lalana izay hitondra antsika mankany Cala Corbs (izay ampahan'ny Lalana Ronda an'i Girona, izay miainga avy any Frantsa ka hatrany Blanes, Barcelona.).
Minitra vitsy aorian'ny nanombohana ny lalana mankany Ronda sy eo akaikin'ny ranomasina dia hahita endrika roa mampiavaka an'io faritra io isika. Etsy andaniny, Cala Foradada, fidirana an-dranomasina kely misy vatolampy misy lavaka ao anaty vatolampy izay ivoahan'ny rano sy amin'ny endrika tionelina. Etsy ankilany, ny tanànan'i Es Castell any Iberia (Taonjato faha-XNUMX talohan'i JK ka hatramin'ny XNUMX M) izay manome ny anarany ny morontsiraka.
Amin'izay fotoana izay dia misedra amin'ny lalana isan-karazany ny arabe. Eto no misy antsika afaka manapa-kevitra isika raha hanao ny lalana akaiky ny ranomasina (sarotra kokoa, miaraka amin'ny fiakarana sy fidinana marobe saingy tsara tarehy sy mahavariana kokoa, asaina manao kiraro mety) na ny làlana anatiny manaraka ny làlambe mandra-pahatongany any amin'ny lalana farany mankany Cala Corbs.
Izaho manokana Manoro hevitra anao aho handeha amin'ny lalana iray ary avereno ilay iray hafa raha azo atao. Na dia sarotra kokoa aza ny lalan'ny morontsiraka dia manana hatsarana izay tsy handiso fanantenana an'iza na iza. Niakatra efa ho 100 metatra ambonin'ny ranomasina ny vatobe ka nahatonga ny tehezan-tendrombohitra mitsivalana be ary ny ala kesika dia manafika ireo lohasaha ireo mandra-pahatongany any amin'ny ranomasina. na izany na tsy ny ora an-tongotra tombanana avy any Es Castell dia eo amin'ny 30 minitra eo ho eo.
Cala Corbs dia iray amin'ireo morontsiraka voalohany izay ho hitantsika manaraka ny morontsiraka. Raha te-hanohy ny avaratra isika dia hahatratra amoron-dranomasina hafa izay atoroko azy, Cala Estreta, 20 minitra eo ho eo miala an'i Cala Corbs. Mbola lavitra any avaratra isika dia hahatratra ny Calella de Palafrugell.
Raha vantany vao tonga any izahay, dia tohatra iray no hanome antsika fidirana amin'ny morontsiraka. Ao no ahafahantsika mankafy ny tontolo sy ny fanambanin'ny ranomasina. Eo akaikin'ny cove sy eo ankavananao dia misy fomba fijery voajanahary izay mivoaka mankamin'ny ranomasina toy ny nosy kely ahafahantsika mandinika ny hakanton'ny tontolo iainana.
Safidy manintona iray hafa manintona ny morontsirak'i Es Castell manofa kayak any amoron-dranomasina La Fosca (2km atsimo kokoa) Mamaky ny faritra manontolo mandritra ny maraina aho mandra-pahatongantsika any Cala Corbs.
Raha tianao ny torapasika virjiny sy mangina, Cala Corbs sy Cap Roig no tanjonao. Amoron-dranomasina kely feno vato ampolony izay ahafahanao misitrika, milomano ary miala sasatra amin'ny tontolo voajanahary voaaro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Barcelona » Ny tsara indrindra amin'ny Costa Brava: Cala Corbs
Teotihuacan (Mexico): ny lova lehibe indrindra an'ny Amerika talohan'ny Columbian